China Polyethylene Glycol 4000 Peg4000 fekitari uye vagadziri | Yinuoxin
PEG-4000 inoshandiswa muhwendefa, capsule, firimu, kudonha piritsi, suppository, nezvimwe
PEG-4000 uye 6000 anoshandiswa sevashandisi muindasitiri yemishonga, kugadzirira kwe suppository nekunamatira, yekumesa mumiriri mupepa indasitiri kuwedzera kubwinya uye kutsetseka kwepepa, chinowedzerwa muindasitiri yerabha kuwedzera lubricity uye plastiki yezvigadzirwa zverabha, kuderedza kushandiswa kwesimba mukugadzirisa. uye kuwedzera hupenyu hwehupenyu hwezvigadzirwa zverabha.
Inogona kushandiswa sematrice mumushonga uye indasitiri yezvizoro kugadzirisa vhisikiti uye nzvimbo inonyungudika, girizi uye inotonhodza murabhoritari nesimbi yekugadzira indasitiri, inoparadzira uye emulsifier mune mishonga yekuuraya zvipuka uye indasitiri ye pigment, antistatic mumiriri uye girisi mumashini yemachira.
Nekuda kwepurasitiki yePEG uye kugona kwayo kuburitsa zvinodhaka, yakakwira mamorekuru uremu PEG (PEG4000, PEG6000, peg8000) inobatsira sekunamatira kwekugadzira mapiritsi. Hoko inogona kuita kuti pamusoro pemapiritsi kuve nekutsetseka uye kutsetseka, uye kwete nyore kukuvara. Uye zvakare, shoma shoma yeakakwira mamorekuru uremu PEG (PEG4000, PEG6000, peg8000) inogona kudzivirira kunamatira pakati peshuga yakaputirwa mapiritsi uye pakati pemabhodhoro.
Performance Uye Kushanda
Iyi nhevedzano yezvigadzirwa inowanzo nyungudika mumvura uye akasiyana makemikari anonyungudutswa, asi asingasviki mune aliphatic mahydrocarbon, benzene, ethylene glycol, nezvimwewo. Iyo ine kugadzikana kwakanakisa, girizi, kugadzikana kwemvura, kuchengetwa kwehunyoro, kunamatira uye kutsiga kwemafuta. Naizvozvo, semafuta ekuzora, moisturizer, dispersant, namira, sizing mumiririri, nezvimwewo, mune chemishonga, zvigadzirwa, rabha, mapurasitiki, makemikari faibha, kugadzira mapepa, pendi, electroplating, mishonga yekuuraya zvipuka, kugadzira simbi, kugadzira chikafu uye mamwe maindasitiri anoshandiswa zvakanyanya.
Kurongedza Specification:mvura yepakutanga 230kg kwakakurudzira dhiragi kurongedza. Solid Yekutanga 25kg Kraft bepa bhegi kurongedza.
Kuchengetedza:Ichi chigadzirwa chinogona kutakurwa zvinoenderana neGeneral Chemicals. Chengetera munzvimbo yakaoma uye ine mhepo inodzivirira chiedza chezuva nemvura.
Mashoko:kambani yedu inopawo dzakasiyana mhando dzeEGEG zvigadzirwa.
Pashure: Polyethylene Glycol 3350 Peg3350
Zvadaro: Polyethylene Glycol 6000 Peg6000
Mould Yijie R-90 Yemukati Yekuwedzera Mould Kuburitswa ...